John Legend wuxuu maalgashaday CBD wuxuuna isku magacaabaa Mu'min • Dawooyinka Inc.eu
John Legend waa shaqsigii ugu dambeeyay ee caan ka ah maalgashiga warshadaha xashiishka. Sida laga soo xigtay Billboard, John Legend wuxuu iskaashi la sameeyay PLUS Products si loo abuuro aCBDsaf of edibles soo bandhigid. Plus waa shirkad ku taal San Mateo, California oo diiradda saareysa adeegsiga alaabada dabiiciga ah si ay isugu dheellitirto nolosha macaamiisha.
"Waan ku qanacsanahay faa'iidooyinka CBD in muddo ah," ayay Legend ku tiri hadal ay soo saartay. “Waxaa ii soo jiitay kooxda Plus maxaa yeelay waa ganacsi qoys cusub oo hal abuur leh waxayna adeegsadaan sayniska si ay u gaarsiiyaan wax soo saar joogto ah oo tayo sare leh. Waxaan ku qanacsanahay sida ay uga go'an tahay inay dejiyaan heer sare warshad si cadaalad ah aan loo xakamayn ilaa maanta. ”
Doorka heesaha caanka ah waa inuu gacan ka geysto kor u qaadista shirkadda wax soo saarka cusub ee CBD. Khadka cusub ee CBD wuxuu ka koobnaan doonaa saddex shey: BALANCE oo ku jira dhadhanka midabka buluugga ah, UPLIFT ee dhadhanka bambeelmada iyo SLEEP ee dhadhanka madow. Dhammaan saddexda alaabood ayaa laga iibsan karaa iyada oo loo marayo website ee shirkadda.
"Waxaan ku dhidibnay sumcaddeena waxyaabaha la cuni karo iyadoo la siinayo macaamiisha si joogto ah oo si sax ah loo qiyaaso cirridka iyadoo la isticmaalayo soo saar tayo sare leh," ayuu yiri Jake Heimark, oo ah madaxa shirkadda PLUS iyo Aasaasaha. Khadkeena CBD wuxuu ku dhisi doonaa khibradaas iyo kalsoonida aan abuurnay, iyadoo khibrad cusub u ah macaamiisha. "
Akhri wax dheeraad ah madowenterprise.com (Source, EN)
Bilayska Tennessee ayaa digniin ku saabsan gaas garsooraha
Meth-gators: Xawaareyaasha cuna maaddada macdanta ee Maraykanka. Booliska Tennesssee ayaa ka digaya…
Dadku waxay isticmaaleen xashiishad iyo shaah dhirta boqolaal sano si ay ugu horumariyaan caafimaadka, bogsashada iyo nasashada. Waxaa…